Media sosialy: tontolon'ny mety hisian'ny orinasa kely | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 31, 2012 Alatsinainy Desambra 31, 2012 Lorraine Ball
Folo taona lasa izay, voafetra ihany ny safidin'ny marketing ho an'ny tompona orinasa kely. Ny haino aman-jery nentim-paharazana toy ny radio, Tv ary na ny ankamaroan'ny dokam-barotra pirinty aza dia lafo loatra ho an'ny orinasa kely.
Avy eo dia tonga ny internet. Ny marketing amin'ny mailaka, ny media sosialy, ny bilaogy ary ny teny doka dia manome ny tompona orinasa kely hanana fotoana hamoahana ny hafany. Tampoka teo, afaka namorona ilay eritreritra ianao, lehibe kokoa ny orinasanao noho ny fanampian'ny tranonkala iray lehibe sy programa media sosialy matanjaka.
Fa ahoana no tena ampiasan'ireto orinasa ireto ireto fitaovana ireto? Isan-taona hatramin'ny taona 2010 dia nanontany fanontaniana momba ny tompona orinasa kely izahay mba hahalalany ny fomba ifandraisan'ny media sosialy amin'ny fifangaroan'izy ireo amin'ny varotra.
Isan-taona, ny angon-drakitra dia manohana ny sasany amin'ireo fihevitray efa ela ary manetsiketsika ny finoantsika hafa hatramin'ny farany. Vonona izany izahay apetraho ireo fanontaniana indray. Na dia nijanona somary marin-toerana aza ny zavatra sasany, nahita fiovana izahay satria toa mavitrika kokoa ny tompona, ary liana amin'ny fampiasana media sosialy ho fampandrenesana marika fotsiny. Tianay ho fantatra raha toa ka mahazatra ny mpihaino marobe ny zavatra hitanay.
Tamin'ny fandalinana tamin'ny herintaona, na dia nandray andraikitra mavitrika kokoa aza ny tompony, dia nitohy nihena kely ny salan'isan'ny fotoana narotsaka tamin'ny media sosialy. Ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny fianaranay dia toa nanondro ny fihemorana dia nateraky ny fampifangaroana fitaovana famokarana bebe kokoa sy ny fomba fiasa mifantoka kokoa amin'ny media sosialy. Liana izahay hijerena raha hitohy amin'ny 2013 ity.
Forbes ary ny famoahana hafa dia manao faminaniana ny fampiasana media sosialy ho an'ireo orinasa lehibe kokoa, tianay ho fantatra izay mitranga ao amin'ny vondrom-piarahamonina madinidinika.
Hahazo toerana ambony latabatra amin'ny Facebook, Twitter ary Linkedin ve i Google+? Herintaona lasa izay, maherin'ny 50% amin'ireo namaly antsika no nilaza fa tsy niditra an-tsokosoko mihitsy amin'ny G +. Izaho manokana dia mieritreritra fa mbola herintaona lavitra amin'ity tambajotra ity no tena tratrantsika, saingy tiako ho fantatra izay lazain'ny angona.
Ahoana ny fomba ifandraisan'ny Pinterest, Instagram ary ireo tranonkala miorina amin'ny sary amin'ny fifangaroana ara-tsosialy amin'ny ankapobeny? Herintaona lasa izay dia tena faly aho tamin'ireny tranokala miroborobo haingana ireny, fa amin'ny ankabeazany, ireo mpanjifako madinidinika dia tsy dia nafana fo tamin'ny filentehana.
Ka raha manana na miasa amina orinasa misy mpiasa latsaky ny 100 ianao dia tianay ho fantatra izay hevitrao. Ahoana ny fampiasanao ny media sosialy ho toy ny ampahany amin'ny varotrao. Azafady, minitra vitsivitsy fotsiny hamaliana ny fanontaniana ao amin'ny fanadihadianay. Hanangona angona izahay hatramin'ny faran'ny volana febroary, avy eo mizara ny valiny amin'ity lohataona ity.
Tags: -barotrahaino aman-jery sosialy orinasa kelyhaino aman-jery sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialy
Tokony hitsahatra tsy hiteny isika fa malaza